Iyo 'Roma yeBritain' inogona kurasikirwa neUNESCO World Heritage Status
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Iyo 'Roma yeBritain' inogona kurasikirwa neUNESCO World Heritage Status
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kukwezva kukuru kwekushanyirwa kungori mamaira 66.5 mamaira (107 makiromita) kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweLondon, Canterbury iri munjodzi yekurasikirwa nerunako uye nhoroondo nekutendera kuwanda kwenhamba yezvinhu zvakashata uye zvekunze mukati, kana padhuze nepakati peguta renhoroondo, rakakomberedzwa mukati maro kutenderera kwemashure medieval.
Canterbury yakatarisana nenjodzi yekuparadzwa, rinodaro boka renhaka.
UNESCO inogona kubvisa Canterbury's World Heritage Saiti chinzvimbo.
Tourism inokosha madhora anosvika mazana manomwe emadhora pagore kuCanterbury hupfumi.
SAVE Britain's Heritage, rimwe remapoka anotungamira eUK, aburitsa chirevo nhasi achinyevera kuti UNESCO World Heritage guta reCanterbury rakatarisana nenjodzi yekuparadzwa zvisina tsarukano.
Kukwezva kukuru kwekushanya makiromita 66.5 chete kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweLondon, Canterbury iri munjodzi yekurasikirwa nerunako uye nhoroondo nekutendera kuwanda kwenhamba yezvinhu zvakashata uye zvekunze mukati, kana padhuze nepakati peguta renhoroondo, rakakomberedzwa mukati medunhu remadziro epakati, akadaro boka renhaka mumushumo.
Nyika yeCanterbury iri kuswedera padhuze nenyika, yakawedzera.
Guta raigona kutevera Liverpool iyo nguva pfupi yadarika yakabviswa yayo UNESCO Nzvimbo yeWorld Heritage Site, Ptolemy Dean, purezidhendi weCanterbury Society, akayambirawo.
Dzazvino dziripo inofungidzirwa yekushanya kwekushanya inosvika madhora mazana manomwe emadhora ekuAmerica pagore kuhupfumi hweCanterbury. Guta rakakwezva vakakomberedza mamirioni makumi matanhatu nemashanu evashanyi pagore COVID-700 denda risati rasvika.
Canterbury inozivikanwa nekereke yayo inoshamisa, imba yemadzitateguru eChechi yeEngland, yakavambwa mugore ra 597 AD, neichi chivakwa chiripo kubva muna 1070.